यी पन्ध्र खानेकुरा : जसले कोलेस्ट्रोल घटाउँछ | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
यी पन्ध्र खानेकुरा : जसले कोलेस्ट्रोल घटाउँछ
access_time२०७६ साल आश्विन २२ गते, बुधबार १२:३५ PM chat_bubble_outline Comments folder_open स्वास्थ्य​ मुख्य खबर​
खानाले तपाईंको कोलेस्ट्रोल र अन्य जोखिम कारकहरूमा प्रभावशाली प्रभाव पार्छ । हामी धेरै खाद्य पदार्थहरू सेवन गर्ने गर्दछौँ । जुन स्वास्थ्य वर्धक आहारको भागमात्र होइन, उनीहरूले सक्रियतापूर्वक तपाईंको कोलेस्ट्रोल कम गर्नमा मद्दत गर्छन् । यीमध्ये केही दिनहु खाने गर्नु होस् ।
तपाईंले जति धेरै आफ्नो आहारमा थप्नुहुनेछ । उनीहरूले तपाईंको कोलेस्ट्रोल कम गर्दछ । जस्तै स्ट्रोक, टाइप २ मधुमेह, उच्च रक्तचाप र कोरोनरी हृदय रोग उच्च कोलेस्ट्रोल त्यस्तो चीज हो जसको बारेमा तपाईं गडबडी गर्न चाहनुहुन्न तपाईंको रगतमा मोक्सीको निर्माणले तपाईंको हृदय रोग, स्ट्रोक र मधुमेहको जोखिम बढाउँछ । तर तपाईंको खानामा यी फूडहरू थप्नुहोस् कोलेस्ट्रोललाई कम गर्न सक्नुहुने छ ।
यो सूचीमा पहिलो सब्जी हो । ब्रोकलीमा कोलेस्ट्रोल कम गुणहरू हुन्छन् । ब्रोकाउलीमा फाइबरले पाचन पथमा पित्त एसिडहरू बाँधेर शरीरको बाहिर निकालेर कोलेस्ट्रोल कम गर्दछ ।
एभोकाडो खानको लागि मिठो फल हो । यो पौष्टिक हुन्छ । धेरै फ्याटको मतलब सँधै अधिक कोलेस्ट्रोल हुँदैन । एभोकाडोमा पाइने पौष्टिक तत्व स्वस्थ प्रकारको वसा हो ।
३. गढा रङको चकलेट
गढा रङको चकलेटको प्रयोगले हृदय रोगको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण जोखिम कारकहरू सुधार गर्न सक्छ । एक नियन्त्रित अध्ययनमा, कोको पाउडरले पुरुषहरूमा अक्सिडाइज्ड कोलेस्ट्रोललाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न पाएको छ । तपाईं गाढा चकलेटको सेवा प्रदान गर्ने वा आफ्नै खानामा एक कप चियाको साथ खादा राम्रो हुन्छ ।
भटमास खाना खाँदा तपाईंको खराब कोलेस्ट्रोललाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । भटमास प्रोटीन, फाइबर र मुटु(स्वस्थ ओमेगा) को एक राम्रो स्रोत हो । भटमास स्वाभाविक रूपमा कोलेस्ट्रोल रहित छ र संतृप्त फ्याट कम छ । त्यहाँ सोयाबीनका विभिन्न किसिमका उत्पादनहरू छन् । जसमा टोफु, नुटेला, सोया नट र सोया दुध पर्छ ।
५. जैतुनको तेल
यसमा मोन्युसेच्युरेटेड फ्याट एभ्याकाडोज जस्तै पाइन्छ । जैतूनको तेलमा पाइने यो प्राथमिक फ्याट स्रोत हो । दैनिक २ चम्चा जैतून तेलले तपाईको कोलेस्ट्रोलको स्तरलाई कम गर्न सक्छ । वास्तवमा मोन्युसेच्युरेटेड फ्याटको उच्च साद्रताले गर्दा जैतुनको तेलले वास्तवमै खराब कोलेस्ट्रोल कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसका साथै जैतुनको तेलमा पनि फिनोलिक्सको ठूलो संख्या हुन्छ । एक पदार्थ जसले तपाईको रगतलाई थक्काउन कम सम्भावना बनाउन सक्छ ।
६. सम्पूर्ण अनाज
ओट्स र ओट ब्रान जस्तो, जौ र अन्य सम्पूर्ण अन्नहरूले हृदय रोगको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ, मुख्यतया उनीहरूले प्रदान गर्ने घुलनशील फाइबरको माध्यमबाट तपाईंको खानामा तपाई यसलाई बिहानको खाजामा थप्न सक्नुहुन्छ । जुन दिनको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण खाना हो । तपाई सजिलै यसलाई दुधमा अनाज थपेर बनाउँन सक्नुहुन्छ र स्वास्थ्य र स्वादिलो ​​ब्रेकफास्टको साथ अन्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
बदाम, पिस्ता, र अखरोट जस्ता खानेकुरामा उच्च मात्रामा असंतृप्त फ्याट वा राम्रो फ्याटहरू समावेश गर्दछ । जसले उच्च घनत्वको लिपोप्रोटीन बढाउँछ । अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि नियमित रूपमा यस्ता खानेकुरा खानले कोलेस्ट्रोल कम गर्न मद्दत गर्दछ । तर धेरै खानु राम्रो हुँदैन । तपाईको सलाद, दलिया र माथि क्रचको लागि यस्ता खानेकुरालाई फ्राई गर्नुहोस् ।
काफलमा कोलेस्ट्रोल कम गर्ने रसायनहरू एन्थोसायनिन, एन्टिआक्सीडन्ट रसायन पाइन्छ । खोजीकर्ताहरूले देखाए कि यसले कलेजोको कार्यको लागि मद्दत गर्दछ । र यो फाइबरको एक महान स्रोत हो ।
आलुबखडामा एन्थोसाइनिन्स वा एन्टीआक्सीडन्टहरू हुन्छन् । आलुवखडा फाइबर, पोटेशियम र एन्टिआक्सिडन्ट्सको उच्च स्रोत हो । अनुसन्धानले देखाएझै हरेक हप्ता एथोसाइनिन युक्त फलको तीन वा बढी सेवनले तपाईलाई हृदय घातबाट धेरै टाढा धकेल्छ ।
के तपाईंलाई थाहा छ नरिवल तपाईंको स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छ ? अध्ययनले पत्ता लगायो कि नरिवल तेल कोलेस्ट्रोल कम गर्न प्रभावी छ ।
११. रातो प्याज
प्याजमा फ्लाभोनोइड्स र एन्थोक्सानन्थिनले कम घनत्वको लाइपोप्रोटीन वा खराब कोलेस्ट्रोल मोटाई भएका मानिसहरूलाई कार्डियोभास्कुलर रोगको जोखिममा कम गर्दछ । त्यसैले कृपया यसलाई तपाईको दैनिक खानामा थप्न नछोड्नुहोस् ।
यो फाइबरमा धनी हुन्छ । कम क्यालोरी हुन्छ । यसले पौष्टिक तत्वहरूको एक श्रृंखला दिन्छ । यसले भूमध्यसागरको आहारमा पनि सुविधा पुर्‍याउँछ । मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम कम गर्दछ । केही जनावरहरूको अध्ययनले पत्ता लगायो कि भ्यान्टा मुटुको कार्य सुधार्न सक्छ । कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइड घटाउन सक्छ ।
यस्तो सोचाइँ छ कि अनारको रसले हृदय रोगको उच्च जोखिममा रहेका कोरीस्ट्रोलको निर्माणमा रोक्न वा सुस्त पार्न सक्छ । एटीअक्सिडन्ट्सले कम घनत्वका लिपोप्रोटीन वा खराब घटाउनेसहित धेरै हृदय सुरक्षा लाभहरू प्रदान गर्ने सोचाइ राखिन्छ । तपाईं यसलाई रसको रूपमा बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईंको जादुई कोलेस्ट्रोल कम गर्ने शक्तिको मजा लिन सक्नुहुन्छ ।
गहुँ, एक उच्च फाइबर, पौष्टिक अन्न हो । जुन स्वास्थ्य लाभसँग जोडिएको छ । जब यो तपाईको कोलेस्ट्रोल कम गर्न आउँछ । यो पुरानो अनाज तपाईंको नयाँ हुनेछ । तपाईं यसलाई चावल वा क्विनोआको रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई केवल भुटेको वा स्टीमबाट स्वादिष्ट तरीकाले बनाउनुहोस् ।
यस मौसमी घटक तपाईंको खानामा सबै प्रकारले थप्न सक्नुहुन्छ । धेरैजसो अध्ययनहरूमा कोलेस्ट्रोल कम परिणामहरू उत्पादन गर्ने क्रममा, लगभग एक आधा ग्राम वा लसुनको एक ग्राम खपत गरियो । त्यो हो, तपाईले जति धेरै लसुन लिनुहुन्छ, तपाईंको कोलेस्ट्रोल कम हुनेछ ।
कोरोना संक्रमित वुहानका यी डाक्टर : स्किन भयो कालो, कोरोनाकै कारण गुमाए ज्यान